Injongo kunye Nemvelaphi yeMorales
Injongo kunye Nemvelaphi yegama lokugqibela 'iMorales'
Amagama amagama angasichazela ngokubanzi malunga nosapho kunye nalapho bavela khona. Kwezinye iilwimi, amagama abonakalisiweyo abhekisela kwimisebenzi yentsapho okanye ubudlelwane kunye nezinye iintsapho. Ngamanye amaxesha amagama angabonakalisa idolophu okanye ummandla welizwe apho intsapho ivela khona. Ukufumanisa ukuba igama lakho lithetha ukuthini kwaye apho livela khona lingaba mnandi ukuqala ukuhlola ulwalamano lwakho. Ungaqala apha ngegama elithi Morales eliqhelekileyo kubantu baseSpanike.
Isiqhelo esinoqhelekileyo saseSpeyin Morales sinemiphumo emininzi enokwenzeka:
Inombolo yezobugcisa zanikwa umntu ohlala kufuphi ne-mulberry okanye i-blackberry bush, evela kumntwana , okuthetha "i-mulberry" okanye "i-blackberry." Isiphelo "es" sichaza igama lomnxeba, ngoko ke ngokuthe ngqo igama elithi Morales lithetha "unyana wokuziphatha," okanye unyana womntu owayehlala kufuphi nomrabri okanye umthi weberberry.
Igama elisetyenziswe ukubonisa umntu "ukusuka eMorales," igama leedolophu ezininzi zaseSpain.
Ngoxa i-Morales yiyona nkcukacha yezona-94 eziqhelekileyo e-United States kunye neyeshumi elinesibini eliqhelekileyo laseSpain .
Igama livela kwiSpeyin kodwa liqhelekile kwisiPutukezi ngokunjalo.
Ezinye izibhengezo zezibhengezo zeli gama eliqhelekileyo zi-Moralez, i-Moral, i-Moreira, i-Mora, ne-Morais.
Kuphi abantu abanegama lomnxeba?
Ngokutsho kweWorldNames publicprofiler, abantu abanomnxeba kaMorales bafumaneka ngokuhlala eSpain naseArgentina.
ESpain, ifani ibonakala kakhulu kwiiItary Islands. EArgentina, ifani ibonakala kakhulu kwingingqi yeCuyo. Nangona kunjalo, abantu abanefayile bangaphila naphi na kwihlabathi.
Abantu abaPhezulu abaneSurname Morales
U-Erik Morales - ubhokisi waseMelika oqeqeshiweyo
Isai Morales - i-American TV kunye neenkwenkwezi zefilimu
ULeon Morales - ubambe irekhodi lehlabathi lokuzidibanisa ngokukhubazeka
Evo Morales - umongameli wokuqala waseNdiya waseBolivia
Izibonelelo zoGenesalogy for the Surname Morales
Amanqaku amaninzi aqhelekileyo e-US kunye neeNguqulelo zawo
USmith, uJohnson, Williams, Jones, Brown ... Ngaba unye wezigidi zabantu baseMelika ezemidlalo enye yalezi zi-100 eziqhelekileyo amagama okugqibela ukusuka kubalo-2000?
I-Morales Project DNA yeProjekthi
Iprojekthi yeNtsapho yaseMorales inamalungu angama-38 + asebenza kunye ukuze afumane ilifa elifanayo ngokubelana ngolwazi lofuzo kunye novavanyo lwe-DNA. Nabani na opelo oluphambili lomnxeba we-Morales naye uyamkeleka ukujoyina.
I-Morales Yesizukulwane sokuzalwa komndeni
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa komnxeba we-Morales isibongo ukuze ufumane abanye abanokuphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho weMorales.
I-FamilySearch - UMALALES Genealogy
Hlola ngaphaya kwezigidi ezi-3.4 zeengxelo zembali kunye nemithi yentsapho edibene nomgca kumntu onomnxeba weMorales kunye nokuhluka kwawo, kubandakanywa iirekhodi zobalo, iirekodi ezibalulekileyo, iingxelo zemikhosi, iirekhodi zebandla kunye nokunye.
Igama le-MORALES Igama kunye neeNcwadi zoLwimi lweeNcwadi
I-RootsWeb ibamba amanqaku amaninzi angabhafisi adibanisa abaphandi begama le-Morales. Khangela kwi-archives okanye uthumele umbuzo malunga nophando lwakho lweentsapho ze-Morales.
DistantCousin.com - UMALALES Uzalwane lomlando kunye nomlando weentsapho
Hlola iintlobo ezahlukeneyo zeenkcukacha zolwazi kunye nezizukulwana zokuzalwa zohlobo lwegama elingu-Morales.
U-WASHINGTON Igama Lokugqibela Nomxholo
Igama le-WATSON Igama kunye Nemvelaphi
IJENKINS - Name Name & Origin
I-CALLAGHAN Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
I-FERRARI - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
I-ELLIS Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
I-PETIT - Igama lomnxeba Umxholo kunye neNtsapho yeMbali
I-XYLANDER Igama lomxholo kunye neNtsapho yeMbali
10 Abaphuli beqhwa eliqathayo eliya kukhuthaza abaFundi bakho
Izixhobo ezivela kwiSiqingatha sokuqala seXesha lama-20
Izilungiso ezilula zeengxaki eziqhelekileyo ngePaintball Izibhamu
Kutheni Usebenzisa Izixhobo Ezibonakalayo?
I-Top 25 yeNtengiso yamaMemes of All Time
Ubude beBond Definition
Ikholeji yase-Saint Elizabeth Admissions
Venus, uThixokazikazi wothando nobuhle
Ukubhiyozela kwiSuku lomNyaka omtsha waseTshayina
Ukukhupha iMouse ukuba uthathe iziganeko ngaphandle kweSicelo
Izizathu ezi-6 zokuQala kwiKholeji yaseKholeji
Umehluko phakathi kwe "Kudasai" kunye ne "Onegaishimasu"
I-PHP yesiHlomelo esiPhezulu
I-Antique Cars 1880 Ngo-1916
Ukuqonda iiFolkways, i-Mores, iTaboos, kunye neMithetho
Iakhawunti YaseKhanada yaseKhanada
I-Top 10 Career Spanning Bon Jovi Iingoma
Shintsha i-ABS Relay yakho okanye i-Abs Controller
Imfundiso yePragmatic of Truth